I-Apple ithuthukisa isibonisi sangaphandle nge-processor edidiyelwe | Ngivela kwa-mac
I-Apple ithuthukisa isibonisi sangaphandle ngeprosesa edidiyelwe ye-A13
UToni Cortes | 24/07/2021 20:00 | Amahemuhemu
I-Apple isebenza ngohlobo olusha lokubonisa lwangaphandle I-Pro Display XDR ene-processor ehlanganisiwe. Umbono omuhle wokukhulula iMac yakho exhunyiwe kusuka ezibalweni zehluzo. Lokho kuzosho ukuthi uxhumeke kwi-Mac mini elula, uzoba nesiteshi esinamandla sokuhlela izithombe nevidiyo, noma ukudlala imidlalo.
Inkinga izofika ngentengo. Uma isikrini sangaphandle esivela ku-Apple sesivele sibiza imali eshisiwe, angifuni ukucabanga ukuthi kuzobiza malini kushiwo iprosesa edidiyelwe neNeural Engine. Sizobona…
Isibonisi sangaphandle se-Apple Pro Display XDR besikade sikhona emakethe isikhathi eside, kepha namanje awekho amahemuhemu ngohlobo olusha olusha esikhathini esifushane. Kepha kuvela ukuthi i-Apple ihlola ngaphakathi isibonisi esisha sangaphandle nge Iprosesa ye-A13 Kunikezelwe futhi futhi nge Injini yeNeural.
Isibonisi esisha senziwa ngaphansi kwegama lekhodi J327, kepha kuleli phuzu, imininingwane ebekiwe yezobuchwepheshe iyimfihlakalo. Kubukeka sengathi lesi sikrini sizoba ne-SoC eyenziwe yi-Apple, okwamanje eyi-chip ye-A13 Bionic, efanayo naleyo esetshenziswe kulayini we-iPhone 11.
Kanye ne-chip ye-A13, isibonisi sangaphandle sifaka iNeural Engine, esheshisa imisebenzi yokufunda ngokuzenzekelayo. Ukuboniswa kwangaphandle okunjalo nge-SoC ezinikele kungenzeka kube imodeli entsha yokushintsha eyamanje I-Pro Khombisa i-XDR.
Ngokuqinisekile kungaba umqondo omuhle. Yiba ne- I-CPU / GPU ehlanganisiwe kwisibonisi sangaphandle kungasiza ama-Mac ukuletha ihluzo ezinokulungiswa okuphezulu ngaphandle kokusebenzisa zonke izinsiza zeprosesa langaphakathi le-Mac.
I-Apple ingahlanganisa futhi amandla wesibonisi i-SoC neprosesa ye-Mac ukuhlinzeka ngokusebenza okwengeziwe kokwenza imisebenzi enamandla kakhulu. Okunye okungenzeka ukusebenzisa le SoC ukufaka ezinye izici ezihlakaniphile ku-Pro Display XDR, njenge I-AirPlay.
Akukaziwa ukuthi umsebenzi uqhubeka kanjani, futhi uma izokhululwa kungekudala iyathengiswa noma kusese yisikhathi sokuthi ilunge. Sizobhekisisa amahemuhemu amasha.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Amahemuhemu » I-Apple ithuthukisa isibonisi sangaphandle ngeprosesa edidiyelwe ye-A13
Umnikelo ovela ku-Apple Germany, i-Studio Buds, nokunye okuningi. Okuhamba phambili kweviki ngivela kwa-Mac
Ividiyo entsha ye-Apple Watch ethinta impilo yomsebenzisi wayo